ခေါင်မိုး gable အိမ်ခေါင်မိုး၏တွက်ချက်မှု
ခေါင်မိုး gable အဘို့အမိုးမိုးပစ္စည်းတွက်ချက်မှု
width ကို X2
X2 - ခေါင်မိုးအနီးခြမ်းမြို့ရိုးရဲ့ width!
ထို rafters ရဲ့ width S1
lathing ပျဉ်ပြားရဲ့ width O1
ပျဉ်ပြား၏အထူ lathing O2
lathing ပျဉ်ပြားအကြား R
အမိုးမိုးစာရွက်ရဲ့ width L2
ထပ်နေသောစာရွက် (%) L3
ခေါင်မိုး gable ၏တွက်ချက်မှု
X - အိမ်ရာအကျယ်
Y - အိမ်ခေါင်မိုးအမြင့်
C - ဖေးအရွယ်အစား
B - အိမ်ခေါင်မိုးအမြင့်
Y2 - နောက်ထပ်အမြင့်
X2 - အပို width ကို
အဆိုပါအစီအစဉ်အမိုးမိုးပစ္စည်းများတွက်ချက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်: ခင်းအကာများ၏ပမာဏကို (ondulin, Nulin, slate သို့မဟုတ်သတ္တု), underlay ပစ္စည်းကို (ကတ္တရာ, အမိုးမိုးပစ္စည်းကို), battens နှင့်ဒိုင်းပျဉ်ပြားများအရေအတွက်။
အဆိုပါအစီအစဉ်နှစ်ခုသည် Modes မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်: နှစ်ဦးဘက် gables နှင့်အတူရိုးရှင်းတဲ့ gable အိမ်ခေါင်မိုးနှင့်တစ်ဦးအမိုး (ဘက်ခေါင်မိုး), အမျိုးအစား 1 နဲ့အမျိုးအစား2။
သတိ! သငျသညျတစျဦး gable ဘက်နှင့်အတူတစ်အိမ်ခေါင်မိုးရှိပါကပထမဦးဆုံးအမျိုးအစား 1 ကိုတွက်ချက်ဖို့ကိုသုံးပြီးတော့, ထို့နောက်2ကိုရိုက်ထည့်။ ဒိုင်းခွေ, battens ပျဉ်ပြား, underlay နှင့်စာရွက်ပစ္စည်းများ: နှင့်ပြီးသားလက်ခံရရှိတဲ့အချက်အလက်မှအဆောက်အဦးပစ္စည်းအရေအတွက်တွက်ချက်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အမှားတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, program ကိုခေါင်မိုးဘက် gables အောက်မှာအဓိကအမိုးအတွက်ဖြတ်တောက်ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
- အပြည့်အဝအရွယ်အစားသို့မဟုတ်ပမာဏအရွယ်အစားသို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၏ပမာဏထက်ဝက်အိမ်ခေါင်မိုးနဲ့ကွင်းခတ်: အဆိုပါတွက်ချက်မှုသငျသညျအနညျးငယျနံပါတ်များကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
အပိုခေါင်မိုးတွက်ချက်တွင် - တစ်ဦးအပြည့်အဝအရွယ်အစားနှင့်အတိုင်းအတာများနှင့်ကွင်း၌နှစျနံပါတ်များနေသောခေါင်းစဉ်: အရွယ်အစားနှင့်အကျယ်တဦးတည်း၏သို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောမိုး။
သတိပေးချက်! အမိုးမိုးပစ္စည်းများ၏တွက်ချက်မှုစာရွက်ထဲမှာ, အစီအစဉ်ခေါင်မိုးဧရိယာပေါ်တွေ့ကစိတျထဲမှာစောင့်ရှောက်လော့။
ဥပမာအားဖြင့်, 7.7 မှ 2.8 တတန်းအတွက်စာရွက်များ၏စီးရီးများပြားလာ၏။ စစ်မှန်သောဆောက်လုပ်ရေး3တန်းကိုထား။
ပစ္စည်းများ၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာအဓိကခေါင်မိုးဒိုင်း, အမျိုးအစား2စစ်အစိုးရအောက်, အစီအစဉ် pediment အောက်မှာဖြတ်ထုတ်ဘက်မပါဝင်ပါဘူး။ ဒါကအစီအစဉ်၏အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်အချို့သောအခက်အခဲများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအစွန့်ပစ်ဘို့အချို့ရဲ့ margin နှင့်အတူဖြစ်သင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကိုဝယ်ခြင်းငှါမေ့လျော့တော်မပါဘူး။